हामी कसरी बुद्धका अनुयायी - Tanahun Awaj
दोस्रो चरणको खोप
भिटामिन ए कार्यक्रम
हावाहुरीबाट तनहु पनि प्रभावित
नयाँ वर्षमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आत्मविश्वास र मनोबल बढेको…
29th October 2020 11th November 2020
22nd October 2020 11th November 2020
15th October 2020 11th November 2020
24th September 2020 11th November 2020
हानिकारक लागूऔषधको सूचीबाट हट्यो गा“जा
11th December 2020 11th December 2020
खुल्ला दिसा, नरकको भिसा
26th November 2020 3rd December 2020
जाडोमा छाला कसरी जोगाउने?
न्याम्स र बिपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति आफूअनुकूल बनाउन स्वास्थ्यमन्त्री…
तिहार : अत्यधिक गुलियो खाँदा हुन्छ यी ६…
7th November 2018 7th November 2018
व्यवसायिक पत्रकारिता गर्ने भए
पत्रकार मतगणनामा व्यस्त सातबजेबाट मतगणना, परिणाम आउन रातभर…
त्यो कालो कराईको कुराउनी
म्यानमारको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाऊँ
सनवे इभेइन्ट्स ले आयोजन गरेको सनवे कप फुटसल…
30th December 2019 30th December 2019
ग्रेस एनएमसी कप फुटसल प्रतियोगितामा रेडन कलेज प्रथम
न्यु मिलेनियम कलेजले जित्यो इन्टर कलेज फुटसल
14th September 2019 15th September 2019
भानुमा सिद्धबाबा कप
1st November 2018 7th November 2018
नेपाल पाकिस्तानसँग ६ विकेटले पराजित
म यस्तै भाकि छु
13th August 2020 13th August 2020
6th August 2020 6th August 2020
30th July 2020 30th July 2020
Goodbye FOMO, Welcome YOLO
13th November 2020 13th November 2020
Pathway To Unite Mind, Body, Soul
3rd June 2019 3rd June 2019
Populism: Democracy’s Honey Or Poison?
Posting pictures of Nepal on Facebook doesn’t make…
11th November 2018 19th February 2021
नया नौलो खबर
नयाँ वर्षमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आत्मविश्वास र मनोबल बढेको छ
व्यासको २९ औं स्थापना दिवस
उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षका लागि तीनजना मैदानमा
ब्राह्मण समाजमा नयाँ नेतृत्व
नेपाल तरुण दल रिसिङको प्रथम अधिवेशन बुद्दिमान सर्वसम्मत निर्वाचित
Home विचार/दृष्टिकोण	हामी कसरी बुद्धका अनुयायी
हामी कसरी बुद्धका अनुयायी
by Tanahu Awaj 11th June 2020 11th June 2020
11th June 2020 11th June 2020 80 views
२०६२/०६३ को आन्दोलन लगत्तै जस्तो लाग्दछ, मलाई शारदा शर्माद्वारा लिखित एउटा पुस्तक पढ्ने मौका मिलेको थियो । अग्नि स्पर्श नामको उक्त पुस्तकमा समेटिएका मुक्त आलेखहरु निकै रुची पूर्वक पढेको थिए । जब कुनै सन्दर्भमा साथीहरु बीच उक्त पुस्तकको चर्चा हुन्छ, त्यसमा समावेश केही आलेखहरुले मेरो मनलाई कुतकुत्याई रहन्छ । दोहो¥याएर पढ्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दछ । अहिले त्यो पुस्तक मसंग छैन । एक पुस्तक प्रेमी साथीले लगेका थिए । तर फिर्ता गरेका छैनन् र अब फिर्ता आउने आशा पनि रहेन ।
मैले किनेका तर अहिले मसंग नभएका पुस्तकको सुची लामै छ । कति पय पुस्तक कसैले लगेर फिर्ता नगरेकोमा खासै चिन्ता लाग्दैन । आफूसंग अहिले नभएकोमा रित्तो अनुभूति हुँदैन । तर त्यसमध्ये केही यस्ता पुस्तक छन्, जुन पुस्तक अलिे मसंग नहुँदा मलाई नमिठो लागेर आउँछ । त्यस मध्ये नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष वी.पी. कोईरालाको कुराकानी समेटर भारतीय समाजवादी नेता भोला चाटर्जीले तयार पारेको पुस्तक थियो मसंग । एक पटक पढेर सकेको त थिए, तर त्यो संग्रह गर्न पर्ने पुस्तक लागेको थियो । किनभने पुस्तकमा कोईरालाले राणा तथा पंञ्चायतकालमा राजबन्दीका रुपमा जेल भोगेका शारीरिक तथा मानसिक यातनाको विवरण त छ । कोईरालामा निहित आत्मविश्वास, राष्ट्रप्रेम र स्वाभिमानका बारेमा पनि पुस्तक पढेर जानकारी पाईन्छ । यी सबै पढ्दा वी पी र उनको पुस्तकले जहाँनिया राणा शासन र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध अनि नेपाली नागरिकको श्रीबृद्धिका लागि गरेको प्रयत्न देख्दा उनिहरु त्यो पुस्तकका प्रति असीम श्रद्धा उत्पन्न भएर आउँदछ । मैले त्यो पुस्तक भृकुटी मण्डप छेउमा रहेको पसलमा भेटेर किनेको थिएँ । २०५२ सालतिर । लामो समय साथीले फिर्ता नगरेपछि कैयौं पटक काठमाण्डौ जाँदा उक्त पुस्तक खोंजे तर पाएको छैन । साथीले फिर्ता गर्ला भन्ने आशा पनि अब रहेन । किनभने जसले लगेको हो उसले निर्लज्ज भएर आफूले नलगेको उद्घोष गरिसक्यो ।
बंगलादेशकी लेखक तसलिमा नसरिनको उपन्यास पनि त्यस्तै पुस्तक मध्ये पर्दछ । बंगलदेशका दुई धार्मिक सम्प्रदायका बीच भएको द्वन्दलाई विषयवस्तु बनाईएको उक्त उपन्यासले विश्वमै चर्चा पायो । उपन्यास माथि बंगलादेशमा प्रतिबन्ध लाग्यो अनि उपन्यास लेखेकै कारण नसरिनको टाउकोको मूल्य तोकियो र उनि लामो समय बेलायतमा निर्वाशनमा बस्नु प¥यो । मलाई त्यो उपन्यासको विषयवस्तुले त छोएको थियो नै संगै कथाभन्नै शैली खुब मन परेको थियो । तर लज्जा पनि निर्लज्जताको शिकार भयो र अहिले मसंग छैन । चक्रपाणी चालिसेद्वारा तयार पारिएको गद्य महाभारत पनि त्यस्तै पुस्तक मध्येको एक थियो । त्यसले पनि अग्नि स्पर्श, लज्जा र वी पी कै पुस्तकको नियति भोग्यो । र अहिले अरु कसैको पुस्तक धराजमा सजिएर बसेको छ । पुस्तक किन्ने तर साथमा संग्रह गर्न र पछि मन लाग्दा झिकेर पढ्ने मौका नपाउनेमा म मात्रै पर्दछु वा अरु पनि हुनुहुन्छ थाहा छैन । तर मेरो हकमा यस्तो धेरै भएको छ । पुस्तक लगेकै दिनदेखि फोन म्यासेज र भेटघाटबाट टाढा हुने पनि भेटिन थालेका छन्, पछिल्लो समय त ।
आलेखको आधाअंश त आफूलाई राम्रा लागेका पुस्तक फिर्ता नपाएको गुनासोमै खर्च भएछ । अब विषयवस्तु तिर लागौं । मलाई ठ्याक्कै शिर्षक त याद छैन तर शारद शर्माको अग्नि स्पर्श पुस्तकमा भएको एउटा आलेखमा उल्लेख भएको विषयको सानो अंश याद छ र त्यसको विषयमा केही चर्चा गर्न चाहेको हूँ यो आलेखमा । शर्माले उक्त आलेखमा हामीलाई सिद्धार्थहरु बुद्ध भएको मन पर्ने वा त्यो आदर्श मन पर्ने तर आफ्नो सन्तान वा आफन्त सिद्धार्थबाट बुद्ध बनेको हेर्न/देख्न नचाहने गरेको उल्लेख गरेकी छन् । मलाई सम्झना भएसम्म शर्माको उक्त आलेखको आशय कुनै पनि आमाले आफूले जन्माएको सिद्धार्थ, बुद्ध बनेको हेर्न चाहदैनन् तर त्यो आदर्श मन पराउँदछन् भन्ने थियो । आमा मात्र किन कुनै पनि बाबु आफ्नो छोरा/छोरी सिद्धार्थ बास्तवमै बुद्ध बनेको देख्न चाहँदैनन् । यदि आफ्नो सन्तानले बुद्ध बन्ने अभयसमा लागेमा उ असफल छोरी/छोरा भनि अथ्याउने गरेको पाईने उल्लेख शर्माले गरेकी छन् ।
आचकलका सुद्धोधन र मायाँदेवीका औकात अनुसारका आफ्ना सन्तानसंगका अपेक्षा छन् । सन्तानले पुरा गरिदिनु पर्ने सपना छन्, गच्छेअनुहारका । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सुद्धोधन र मायाँदेवीको आकाँक्षा छ, छोरा/छोरी खासगरी छोरा साउदी वा कतार देश जाओस् र कमाई गरेर शहर बजारमा सके घर, नभएपनि घडेरी जोडोस् । खेतीपाती, मेलापात, गोवर घसेटा गरेर वितेको दैनिकीमा परिवर्तनमा ल्याओस् । मोही र आँटो खान पर्ने अवस्थाबाट अलि माथि उठेर मिठो मसिनो खान पाउने, आँङ्ग ढाक्ने गरी लुगा लगाउन पाउने अवस्था बनोस् । शहर बजारका र अलि सम्पन्न परिवारका सुद्धोधन र मायाँदेवीको आकाँक्षा अलि फरक हुन्छ । उनिहरु आफ्ना सिद्धार्थहरु अमेरिका, अष्ट्रेलिया, यूरोप वा यस्तै देश जाउन, त्यतैको पिआर वा ग्रिनकार्ड छ भनेर छिमेकी वा आफन्तसंग भन्न पाइयोस् । छोरा वा छोरीले समय मिलाएर उता घुम्न आउने निम्तो दिउन र जान पाउँ अनि फर्केर आएर त्यहाँको बैभवका बारेमा बर्णन गर्न पाईयोस् । शहरमा अझै ठूलो घर होस् । गाडी होस् । घरमा नोकर चाकर राख्न सकियोस् । आदि आदी । बुबा आमा, साथीसंगी लगायत सबैको पुरा गर्न पर्ने अनगिन्ती अपेक्षाको भारीले थिचिएको कोहीले कसरी मार्गको अनुशरण गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ?
शर्माले भने झैं आधुनिक आमा अब मायाँदेवी बनेर सिद्धार्थ जन्माउन तयार त छन् । तर तिनीहरु बुद्ध भएको हेर्न चाहँदैनन् । अनि सुद्धोधनहरु पनि आफ्ना सन्तान सिद्धार्थबाट बुद्धमा रुपमान्तरित भएको हेर्न तयार छैनन् । हामी कामना गर्दछौं, हरेक नेपाली आमाहरु मायाँदेवी बनेर सिद्धार्थको जन्म दिउन् । र उनीहरु बुद्ध बनुन् । गर्व गर्दछौं बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर । यशियाका तारा जन्मेको देशका नागरिक भनेर ।
तर आफ्नो सन्तान यशियाको तारा बनेको देख्ने चाह राख्दैनौं । जसले दरबारको सुविधा त्यागेर संसारको हितको लागि सन्न्यास धारण गरेको थियो । आर्दश मन पर्ने तर त्यसको अनुशरण गर्न मन नपराउने हामी कसरी बुद्धका अनुयायी भयौं ?
ए यस्तो पो……..
विना सुनवाई जेलमा चालीस बर्ष
कुन तीज रमाइलो उहिलेको कि अहिलेको
हुन नसकेको विद्रोह
संविधान दिवसको शुभकामना-सम्पादकीय
प्रशिक्षार्थी शिक्षकको अनुभव
साबधान ! बाँकेबाट चिल्न थाले अरिंगालले
तातो पानीमा नुहाएर कमजोरी पखालिँदैन
मानव मनभित्र एउटा यस्तो गुण हुन्छ, जसले उचित-अनुचित जुनसुकै कारणले भए पनि कसैले भोग्नुपरेको दुःख प्रति प्रायजसो उदासिन रहँदैन । बी.पी. कोइराला
बिहि, बैशाख ९, २०७८
दोस्रो चरणको खोप 22nd April 2021
भिटामिन ए कार्यक्रम 22nd April 2021
हावाहुरीबाट तनहु पनि प्रभावित 22nd April 2021
व्यवसायिक पत्रकारिता गर्ने भए 15th April 2021
नयाँ वर्षमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आत्मविश्वास र मनोबल बढेको छ 15th April 2021
गोविन्दराज जोशी लाई पाखा लगाएर तनहु कांग्रेस ऊभो लाग्दैन
कांग्रेस सदस्यता खारेजी समाचार झूटा
बृहद बैठकबाट क्षेत्रीय समिति
रामचन्द्र पौडेलको सपना दुवै अधुरा
नेपाल रहे धर्म निरपेक्षता रहँदैन
Kishor Pariyar on ओजोन तह संरक्षण सबैको जिम्मेबारी
Bimal Gautam on वर्वाद भयो
शिद्धेस्वर बोगटी on गोविन्दराज जोशीलाई बिर्सन सकिन्न
Tirtha on SHIVA SARASWATI SECONDARY SCHOOL: THE PAST AND THE PRESENT
भरत कुमार श्रेष्ठ on क्वारेन्टाईनलाई आवश्यक सामग्री वडावडामा पुर्याउँदै शहीद पुत्र
Tanahun Awaj provides you news and views from Tanahun District and surrounding areas.please do not hesitate to contact us if you want to contribute.
वर्तमान सम्पादक: ऋषिराम पोख्रेल
सहसम्पादकः रमेश विकल
उपसम्पादकः प्रभात पोख्रेल
व्यवस्थापकः पुष्पा पोख्रेल
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता मिति २०६७।७।८ नं. ७७१२७/०६७/०६८
कम्पनीको नाउँको स्थायी लेखा नं. ३०४४४२०८५
४तनहुँ आवाज साप्ताहिक जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा दर्ता नं. १६४१/०५४।८।६
सस्थापक सम्पादकः कमलामोहन वाग्ले
Contact no: 065-560812
Vyas-2, Damauli Tanahun
विज्ञापनका लागि: 065-560812, 9856063721
@2018 - https://tanahunawaj.com.np. All Right Reserved.